8 Talo oo fudud oo SEO ah oo YouTube ah si aad Fiidiyowyadaada ugu kala sarayso raadinta | BehMaster
Bogga ugu weyn/YouTube/8 Tabaha fudud ee YouTube SEO si aad Fiidiyowyadaada ugu kala sarayso raadinta
8 Tabaha fudud ee YouTube SEO si aad Fiidiyowyadaada ugu kala sarayso raadinta
0 Daqiiqado 6 ayaa akhriyay
Qof kastaa wuu ogyahay in dadku ay doorbidi lahaayeen daawashada fiidiyowga intii ay akhrin lahaayeen qoraal dheer oo blog ah (Waan ogahay, waa inaan tan u sameeyaa muuqaal ahaan-laga yaabee hal maalin). Dhab ahaan, 59% fulinta Waxay yiraahdeen waxay jeclaan lahaayeen daawashada muuqaal intii ay akhrin lahaayeen qoraal. Taasi waa dad badan. Taas oo macnaheedu yahay fiidiyowga SEO waxay yeelan kartaa faa'iidooyin aan la tirin karin: saacadaha saacadaha oo kordha, wacyiga summadaha oo ballaaran, iyo iib iyo hogaamin badan.
Matoorada raadinta sida YouTube iyo Google waxay isticmaalaan aasaas isku mid ah algoorithms-kooda bogga internetka iyo darajada muuqaalka. Diiradadu waa in la siiyo isticmaalaha khibradda ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, iyo natiijooyinka raadinta fiidiyooga YouTube hadda waxaa lagu daray natiijooyinka raadinta Google si loo fududeeyo sida dadku wax u baadho.
Balooggan, waxaan kugu dhex socon doonaa sida saxda ah ee aad ugu wadi karto taraafikada fiidiyowyadaada YouTube adigoo isticmaalaya qaar ka mid ah talooyinka SEO fudud.
8 tabaha fudud ee YouTube SEO si aad ugu sarreyso raadinta
Waxaad isku dari kartaa SEO-gaaga iyo istaraatiijiyada fiidiyowga si aad uga caawiso kor u qaadista suuq-geyntaada si quruxsan oo toosan oo fudud. Samaynta tani kaliya ma wanaajin doonto wakhtiga fiidyahaaga, laakiin sidoo kale waxay soo jiidan doontaa dareenka macaamiishaada, waxayna kaa caawin doontaa inaad hoos ugu sii dhigto waxyaabaha ay ka mid yihiin dib u suuq gaynta YouTube. Halkan waxaa ah siddeed tillaabo oo lagu horumarinayo YouTube SEO-gaaga si aad u wado taraafikada iyo muuqaallada fiidyaha badan.
1. U dooro ereyada muhiimka ah si xikmad leh
SERPs waxay helayaan tartan badan bil kasta. Tartamayaal cusub, badeecooyin cusub, adeegyo cusub-qof kastaa wuxuu u dagaallamayaa kaalmaha ugu sarreeya. Markaa, helida siyaabo aad ku kala duwanaato naftaada iyo wax bixintaada waa muhiim. Samee cilmi-baarista ereyga muhiimka ah, iyo ilaa aad ku tartami karto ereyo dhab ah, soo qaado ereyada muhiimka ah ee ku heli kara mugga, laakiin aad u tartan yar.
Waxaad isticmaali kartaa isla aaladaha cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ee aad u isticmaali lahayd PPC ama SEO, sida
Aaladda Furaha ee Bilaashka ah ee WordStream
Qorsheeyaha Keyword Google.
Moz ama Semrush.
Raadinta Google-ku-soo-jeedinta, dadku waxay sidoo kale weydiiyaan, baaritaanno la xiriira, iyo in ka badan!
2. Isticmaal ereyada muhiimka ah ee cinwaankaaga fiidyaha
Fahamka ujeedada raadinta ee dhagaystayaashaada waa talaabada ugu horeysa. Waxaan ognahay in noocyada ugu caansan ee ujeeddooyinka raadinta ay ka mid yihiin xog-ururin, ganacsi, socdaal, iyo macaamil ganacsi. Markaa, ku habboonaanta waxa fiidyahaagu ku saabsan yahay ulajeeddada macmiilkaagu waxay noqonaysaa mid aad muhiim u ah in fiidyahaaga lagu arko natiijooyinka raadinta.
Marka labaad, hubso, inaad fahantay MAXAAD u rabto inaad abuurto fiidiyoow YouTube ah iyo cidda dhagaystayaasha koowaad yihiin. Tusaale ahaan, haddii aad raadinayso inaad soo bandhigto dib u eegista alaabta, ka dib isticmaal magaca alaabta ee ciwaanka fiidyaha iyo sharaxaada. Runtii way fududahay, laakiin waxaa jira kanaalo badan oo YouTube ah oo seegay tallaabadan oo muuqaalladoodu waxay muujinayaan inay hooseeyaan natiijooyinka raadinta Google iyo YouTube.
Hoos waxaa ah tusaale ku saabsan sida ereyga 'dell computer review' uu u yahay tartan. Eraygani waa wax laga yaabo in uu qof raadiyo marka ay ka fiirsanayaan alaabta. Fiidiyowyadani waxay ka soo baxayaan YouTube, laakiin sidoo kale waxay ka soo baxayaan mareegaha iyo baloogyada kale ee shabakadda.
3. Ku dar erayga muhiimka ah faylkaaga fiidyaha
Aad u fudud, laakiin YouTube ayaa laga yaabaa inay tan u isticmaasho mid ka mid ah qodobbada darajada marka ay timaado muujinta fiidyahaaga natiijooyinka raadinta. Haddii magaca faylka aad soo gelinayso uu leeyahay ereyga muhiimka ah ee bartilmaameedka ah, fiidiyahaagu wuxuu yeelan doonaa fursad aad u wanaagsan oo lagu qiimeynayo - iyo fursad aad u wanaagsan oo lagu helo mugga raadinta badan.
Markaad fiidyow cusub soo gelinayso, waxaad arki kartaa magaca faylka. YouTube waxa ay u isticmaashaa tan si ay u hubiso in muuqaalku khuseeyo, markaa hubi in magacaga faylka la cusboonaysiiyay ka hor inta aanad soo galin!
4. Wanaaji sharaxaadaada fiidyowga YouTube
Mid ka mid ah qodobbada darajada ugu muhiimsan ee YouTube SEO waa hubinta inaad haysato sharraxaad muuqaal ah oo adag, la hagaajiyay. Mar kasta oo aad beddesho ama cusboonaysiiso qayb kasta oo fiidyowga YouTube ah—oo ay ku jiraan sharraxaadda fiidyowga, qoraal hoosaadka iyo qoraallada xidhan, iyo sawirka thumbnails—YouTube ayaa dib u qiimayn doona fiidyaha. Tani waxay noqon kartaa mid wanaagsan ama xun… marka waa muhiim inaad saxdo marka ugu horeysa!
YouTube waxay ku talinaysaa inaad geliso ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan labada jumladood ee ugu horeeya ee sharaxaadaada - iyo in sharaxaaddaadu aanay ka badnaan 200 oo kelmadood. Si ballaaran u hadla — ka dhig tilmaantaada mid faa'iido leh. Haddii aysan caawin isticmaale — tirtir.
Waxaad hoos ka arki kartaa, in ereyga muhiimka ah ee aan ku qoray Google uu si geesinimo leh ugu jiro sharraxaadda fiidiyowyada soo baxay. Tani waa habka YouTube uu iigu sheego fiidiyowyadu inay khuseeyaan sharraxaadda fiidyaha.
Youtube waxay leedahay ilo aad u fiican oo ku saabsan Youtube Abuuraha Studio kaas oo ah kheyraad had iyo jeer la cusboonaysiiyo macluumaadka hadda jira. Waxay leedahay liis waxtar leh oo kugu hagaya tillaabooyinka sifaynta fiidyaha ee guuleysta:
Ku dar muuqaalka guud ee fiidyahaaga addoo isticmaalaya luqadda dabiiciga ah—ma aha kaliya qulqulka ereyada muhiimka ah.
insert ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan bilowga sharaxaadaada.
qaado 1–2 kelmado muhiim ah oo sharxaya fiidyahaaga oo si weyn uga dhex muuqda sharraxaada iyo ciwaankaba.
Isticmaal qalabka ereyada muhiimka ah sida Isbeddellada Google iyo Google Ads Qorshaha Kelmadaha si loo aqoonsado ereyada muhiimka ah ee caanka ah iyo kuwa la mid ah. Marka lagu daro shuruudahan ayaa kaa caawin kara inaad sare u qaaddo taraafikada raadinta.
Iska dhaaf ierayada ku haboon ee sharaxaadaada sababtoo ah waxay abuurtaa waayo aragnimada liidata waxaana laga yaabaa inay jabiso Siyaasadaha Google.
5. Isticmaal hashtagyada fiidyowga ah si aad u wado natiijooyinka raadinta YouTube
Guud ahaan warbaahinta bulshada, hashtags (#) ayaa hadda loo isticmaalaa in lagu caawiyo isticmaalayaasha inay helaan macluumaad ka jawaabaya su'aalahooda meelo kala duwan. Waxaad ku isticmaali kartaa hashtag la xidhiidha sharaxaadaha fiidyaha si ay uga caawiso daawadayaasha inay helaan fiidyahaaga markay raadiyaan hashtag gaar ah.
Tags ayaa si gaar ah u caawiya raadinta raadinta maaddaama ay isbeddellada muhiimka ah ka dhigaan kuwo muuqda. Marka aad ku darto hashtag sharaxaadda fiidyowga, waxa lagu tusi doonaa korka ciwaanka fiidyaha ka dibna waxa ay noqonaysaa mid isku xidhan.
Waxa kale oo muhiim ah in la xasuusto halka aad ku dartay hashtagyada fiidyowga ah halkan. Haddii aad ku darto hashtag ciwaanka fiidyaha, hashtagyada sharaxaada lama soo bandhigi doono ciwaanka fiidyaha.
6. Dooro qayb muuqaal ah
Haddii isticmaalayaashu ay raadinayaan fiidiyoo gaar ah oo leh doorashooyin horumarsan, waxay dooran karaan raadinta si ay u muujiyaan fiidiyowyada qaybaha la doortay. Markaad soo galinayso fiidyahaaga, waxa muhiim ah in aad muuqaalkaaga ku qaabayso qaybo si aad fursad fiican ugu hesho isticmaaluhu.
YouTube waxay leedahay noocyo kala duwan oo ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo laga soo dooran karo, markaa waa inaad awood u yeelatid inaad hesho qayb ku habboon fiidiyowyada YouTube-kaaga. Waxaad dooran kartaa fursadaha category marka la geliyo aad video.
7. Habee sawirkaaga thumbnail
Sawir-gacmeedku wuxuu ku caawin karaa ama xannibi karaa fiidiyowyadaada YouTube. Waa waxa ugu horreeya ee soo jiita dareenka dadka marka ay eegaan natiijooyinka raadinta YouTube. thumbnail xooggan wuxuu u horseedi karaa daawasho sare, kaas oo saameyn weyn ku yeelan kara darajada YouTube. Abuur wax soo jiita dareenka dadka oo ka soo dhex muuqda dadka si muuqaalkaga loo dareemo. Tusaale ahaan, sawir-gacmeedyadan waxa laga soo qaatay fiidyowga laftiisa oo malaha maaha kuwa ugu habboon soo jiidashada dareenka isticmaalaha.
Abuuritaanka thumbnail gaar ah ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu arko natiijooyinka—tusista dadka waxa uu muqaalkaagu ku saabsan yahay iyo sida uu uga faa'iidaysan doono waa furaha dhabta ah ee guusha.
Tusaalaha weyn ee thumbnail-ka la habeeyey:
8. Ku dar qoraal hoosaadyo iyo qoraallo xidhan
Isticmaalka qoraal-hoosaadyo iyo qoraallo xiran ayaa ah tilmaanta ugu dambeysa ee guusha raadinta YouTube.
In kasta oo qoraal-hoosaadyada fiidyaha loo qorsheeyay in lagu gudbiyo wada-hadalka fiidyowga ee daawadayaasha aan fahmi karin luqadda muuqaalka, qoraallada xiran waxaa loogu talagalay daawadayaasha aan maqli karin codka.
Qoraal-hoosaadyada iyo faylalka qoraalka-xiran labaduba waxay ka kooban yihiin qoraalka waxa fiidyaha lagu sheegay, sida qoraal-qoraal. Faylku waxa kale oo uu ka koobnaan doonaa codes wakhtiga marka qayb kasta oo qoraal ah lagu soo bandhigo fiidiyowga, si ay ula mid noqoto hadalka ama qayb kale oo muuqaal ah. Fiiri noocyada faylalka YouTube-ku uu taageeray halkan.
Faa'iidada kale ee helitaanka qoraallada fiidyahaaga ayaa ah in lagu qaadi karo matoorada raadinta ballaaran, si la mid ah balooggu.
Shaashadda gelinta fiidiyowga, waxaad dooran kartaa kaaga faylka iyo luqadda muuqaalka. Waxaa jira hagayaal badan oo aad u wanaagsan oo ku saabsan sida loo abuuro faylka SRT ee fiidiyowgaaga. Waa kan mid aan inta badan isticmaalo!
Ku gaadh darajo sare talooyinkan YouTube SEO
Haddii aad raadinayso inaad ku xayeysiiso ganacsigaaga YouTube, adeegso tabahan YouTube SEO si aad kaaga caawiso hagaajinta taraafikadaada fiidyaha iyo wakhtiga daawashada:
U dooro ereyada muhiimka ah si xikmad leh
Ku dar ereyada muhiimka ah ciwaanka fiidyaha
Ku dar kelmado fure ah faylka fiidiyowga
Isticmaal hashtagyada fiidiyowga
Dooro qayb muuqaal ah
Isticmaal sawir-gacmeedyo indho-qabad leh
Ku dar qoraal hoosaadyo iyo qoraallo xiran
Ugu dambayntii, u samee cilmi-baadhistaada sidaad ugu samayn lahayd qayb kasta oo kale oo ka kooban. Diirada saar abuurista fiidiyowyo aan cagaar ahayn oo aad ku dhisi karto si aad u xoojiso faylalkaaga nuxurka. Xogta waxtarka badan ee aad siiso isticmaaleyaasha, ayaa mugga raadinta badan ee aad ka heli doontaa ganacsigaaga iyo kanaalka YouTube!
Ellie Buckle waa Madaxa Dijital iyo Istaraatiijiyadda Warbaahinta Ujeeddada halkaas oo ay ka caawiso in ay raadiso oo ay ku soo noqoto maalgashiga macaamiisha guud ahaan hay'adda. Waxaad wax badan oo shaqadeeda ah ka akhrisan kartaa Blog-ka Ujeedada Warbaahinta.
Sida loo Dejiyo Muuqaalka Saxda ah ee SMTP Settings si loogu diro iimaylo
Sifada dib u eegista gaarka ah ee Google Chrome waxay wanaajin doontaa sirtaada
3 Khiyaamo lagu Abuuro Xayeysiiska Fiidiyowga ee Miisaaniyadda
Sida loogu xayeysiiyo YouTube-ka 10 tilaabo (Pro Tips)
Sababta & Sida loogu daro Hashtags Fiidyaha YouTube ( Talooyin Pro)
Waxaa laga yaabaa 20, 2022
4 Dejinta Daabacaadda Wanaagsan si aad uga digtoonaato Ololaha Fiidiyowga ee Google Ads
10ka Software ee Tafatirka Fiidiyowga ugu Fiican ee Bilowga ah 2022
14ka ugu Fiican ee Soodejiyaha Fiidiyowga YouTube ee bilaashka ah (Febraayo 2022)
Fiidiyowga ugu sarreeya Tilmaamaha Istaraatiijiyada SEO [Podcast]
YouTube SEO Laga bilaabo Aasaaska ilaa Sare: Sida Loo Wanaajiyo Fiidyahaaga
Hagaha Dhamaystiran ee Istaraatiijiyada Mawduuca ay Hogaaminayso Alaabta (Tusaaleyaal)
Fiidiyowga SEO: 10 Tallaabo oo lagu Hagaajinayo Fiidiyowyada Raadinta iyo Helitaanka
Dhibcaha Muhiimka ah ee Shabakadda Muhiimka ah waxay horumariyaan goobaha darajada sare leh
1 min ka hor
Hagaha Konsolaha Raadinta Google oo Dhamaystiran ee Faa'iidooyinka SEO
saac ka hor 20
saac ka hor 21
UA vs GA4: Socdaal dhammaystiran oo Google Analytics 4
Warbaahinta bulshada 733
Content Suuq 697
YouTube Shorts: Hagaha hordhaca ah
5 Talooyin Suuqgeynta iyo Khiyaamooyinka Laga soo bilaabo kanaalada ugu sarreeya YouTube
Abuurayaasha Mawduuca Keebaa Isticmaalaya YouTube-ka Gaaban (iyo Waayo)?
6 dariiqo oo ay xogta ku taageerto si kor loogu qaado ganacsigaaga YouTube
40-ka Muuqaal ee ugu Fiican ee Wakhti Walba
12 Talooyin si aad u abuurto raadiyaha kanaalka YouTube ee soo jiidashada leh (Tusaaleyaal)
Sida Looga Helo Muuqaalo Badan YouTube: Khubarada Waxay wadaagaan Talooyin
4 Warbixinta Istuudiyaha YouTube ee Faa'iidada leh ee Aanad ka heli doonin Xayeysiiska Google
Waxaa laga yaabaa 12, 2021
10ka Xul ee Ugu Wanaagsan Qalabka Keyword YouTube
20 Xaqiiqo oo La Xaqiijiyay oo Ku Saabsan Algorithmka YouTube
Youtube-ka Shorts-ka ma la soo galin karaa? Digniinta Qaswadayaasha: Qaar baa durba jira!
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Xayeysiisyada Maqalka ee YouTube
Sida Loo Sameeyo Xayeysiiska Fiidiyowga ee Miisaaniyadda Fiidiyowga YouTube-ka
Maamulaha YouTube ayaa shaaca ka qaaday mudnaanta 2021 ee abuurayaasha
Kuma faraxsana URL-kaaga YouTube? Waa kan sidaad u bedeli karto
Sida Loo Isticmaalo Xayeysiiska YouTube-ka si loo Taageero SEM: Hagaha Tallaabo-tallaabo
Xayeysiiska Super Bowl ma u qalmaan lacagta mise YouTube waa beddel?
YouTube SEO ee Bilaabayaasha: 10ka Dhaqan ee ugu Fiican ee lagu bilaabo
Fiidiyowyada YouTube-ka ee 2020-ka ugu-sarcan waxay muujinayaan in ka sii dheeraanayo
7 shuruudood oo loogu talagalay Kanaalka YouTube-ka ee guuleysta
20 xayaysiisyada khadka tooska ah ee shucuur ahaan ugu mashquulsan suuqgeynta fasaxa
Sida Fiidiyowga Loogu Qiimeeyo YouTube & Google
Sida Hal-abuurayaasha YouTube u Sameeyaan Lacag: Hagaha Lacag-ururinta ee Guusha
Sida Loo Isticmaalo Google Trends for YouTube
4 Xeelado Fudud oo loogu talagalay Xayeysiiska Fasaxa YouTube ee Waxtarka badan leh
Hagaha bilowga ah si loo doorto Platform Hosting Video saxda ah
Sida Loo Abuuro Guriga-Grigga-Guriga Fiidiyowyada Suuqgeynta DIY Iyadoo Bulshada Kala Fogaan
Sida loo hagaajiyo Shabakadda & Meelaynta Bartilmaameedka Xayeysiiska YouTube
Tagitaanka Warbaahinta Bulshada ee Fiidiyowyada Suuqgeynta Xaashida Khiyaanada
Sida Loo Isticmaalo Suuqgeynta Fiidiyowga Shakhsi ahaaneed si loo kordhiyo Ka-qaybgalkaaga
YouTube ma ku dhowdahay inuu cusboonaysiiyo Algorithm-keeda Marlabaad?
Sidee YouTube-ku U Samayn Karaa Fiidiyowga Aalad Ka Faa'iido Badan
Sida YouTube u soo saaro & Darajooyinka Fiidyaha la soo jeediyay
Sida Loogu Helo Muuqaalo Badan YouTube: 10 Talooyin oo la isku dayo Maanta
Waxaa laga yaabaa 11, 2020
Sida Looga Faa'iidaysto Natiijooyinka Wakhtiga Fiidiyowga ee Raadinta Google
Waxaa laga yaabaa 8, 2020
6 Tilmaamaha Suuqgeynta Fiidiyowga ee Xeeladda Wacan
Sababta & Sida Looga Faa'iidaysto Xayeysiiska Fiidiyowga Kacdoonka COVID-19
Tilmaamaha Dhamaystiran ee Ku Bilaabashada Tooska ah ee YouTube
7 nooc oo u muuqda kuwo xun inta lagu jiro cudurka faafa ee Coronavirus
Macaamiisha oo Raadinaya Waxyaabo kor u qaadaya YouTube-ka Inta lagu jiro Faafida COVID-19